Recovery File MacBook: Ladnaansho tirtiray, formatted & dibabaxayaal Files
> Resource > Mac > Recovery MacBook File: Ka Dib masaxay, formatted & dibabaxayaal Faylal ay ka Your Mac
Xaaladaha Common sababi Loss MacBook Data:
»Qalad ah tirtiray MacBook files & fayl
»dhaco madhiyo Mac qashinka
»dhaco formatted qoruhu MacBook
Haddii aad ayaa laga badiyay files muhiim ah ama galalka ay sabab u tahay mid ka mid ah hawlaha shil kor ku xusan, waxaad weli iyaga dib ugu heli karaa; iyadoo la kaashanayo dhinac saddexaad software Mac kabashada xogta. Si aad u doorato qalabka xaq u soo kabashada xogta, wax wanaagsan in ay taageerto dib u soo kabashada ee xogta la tirtiro, formatted ama weelna Trash. Haddii aad weli raadinaya software saxda ah, waan ku sujuudayaa reccomend Wondershare ee u gaarka ah Data Recovery for Mac , kaas oo awood kuu inay soo kabsadaan files Mac , wax aad iyaga laga badiyay ay sabab u tahay xaalad kasta oo kor ku xusan.
Download version maxkamad free of this fudud oo degdeg software kabashada file Mac hoos ku qoran.
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in aad soo kabsado files helay barnaamijka ka dib, waa in aad si fiican u badbaadin lahaa natiijada scan, Ammaanka awgiis.
Siduu u Recovery File MacBook
Dooro version saxda ah si ay u soo bixi oo ku xidh on your computer. Markaasaa waxaa u abuurtaan. Next, aynu isku day Data Recovery ee Mac wada.
Step1. Dooro Qaabka Recovery ah
Ka dib markii ay ku rakibidda this MacBook software kabashada xogta, waxa maamula aad Mac oo waxaad heli doontaa interface sida hoos ku qoran.
In daaqadan aasaasiga ah, waxaa tahay shan ulood oo menu:
Lumay Recovery File - Ladnaansho files tirtiray, formatted ama weelna Trash; ceeriin Recovery - hab An soo kabsado sare, inuu ka soo kabsado files in aadan soo kaban karto, by lumay Recovery File; Parition Recovery - qoruhu raadinta tirtiray, lumiyo, resized ama u kharribmay oo soo kabsado files ka Dhumay Xagooda; iPhone Recovery ka Lugood - Ladnaansho files lumay ee iPhone, iPad iyo iPod taabto ka Lugood gurmad files. furmaya Recovery - Import badbaadiyey natiijada scan in dib loo bilaabo kulan kabashada hore.
Waxaad mid ka shaqaysa si aad u sii dooran kartaa. Aan isku dayno ah "lumay Recovery File" wada: Sawirka, eegis iyo soo kabsado.
Step2. Dooro isha Mac HD meesha xogta aad guuldarro iskaan
Step3. Files Kulanka Xiisaha Leh MacBook ceshan iyaga eegista
Waxaa jira hal wax oo aad bixiso hadeeyey dareenka waa in: Mar kale ha badbaadiyo files soo kabsaday oo uu meesha dhalshada. Raadi xijaab kale ama disk dibadda si ay u kaydiso, si loogu tixgeliyo ammaanka.